शुक्रबारबाट ‘हिरो नं. १’ – Khabar Silo
काठमाडौँ । नायक जय किशन बस्नेतले निर्देशन गरेको पछिल्लो चलचित्र हिरो नं. १ भोली २७ गते शुक्रबारदेखि देशब्यापी रुपमा प्रदर्शनमा आउन लागेको छ । यो चलचित्र उपत्यका भित्र र बाहिर गरी कुल ८५ वटा हलमा प्रदर्शनमा आउँन लागेको हो ।
आफ्ना लागी भन्दा पनि दर्शकको मनोरञ्जनको लागी आफुले चलचित्र निर्माण गरेकोले चलचित्रलाई दर्शकको जिम्मामा छोड्दै चलचित्रको निर्माता तथा निर्देशक समेत रहेका नायक बस्नेतले हिरो नं. १ को स्लोगनमा ‘म रोए पनि मेरा दर्शक हाँसी रहुन्’ भनेर राखेका छन् । चलचित्र व्यवसायिक रुपमा कतिको सफल बन्न सक्छ त्यो भने प्रदर्शनमा आउँनासाथ थाहा हुनेछ ।